07 Antalya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 Antalya
Gaadiidka tareenada iyo fiilooyinka ee Antalya
Iyada oo laga duulayo Qorshaha Masterka Gaadiidka, kaas oo uu marayo dib u eegis lagu sameynayo 19 degmo, Antalya Dawlada Hoose waxay qabanaysaa shirar ku saabsan gaadiidka iyo xalinta dhibaatooyinka dhamaan degmooyinka oo ay ku jirto xarunta. Manavgat sidoo kale dhibaatooyin xagga gaadiidka ah ayaa haysata [More ...]
Dawlada hoose ee Magaalaweynta Antalya waxay bixin doontaa nidaamka digniinta codka ee basaska dawlada hoose iyo joogsiyada si loogu suurtogaliyo muwaadiniinta araga Naafada ah inay si fudud u gaaraan gaadiidka dadweynaha. Markaa shakhsiyaadka aragga liita [More ...]
Dowlada Hoose ee Antalya waxay ku dartay 10 istaag oo cusub oo xirid ah Kestel iyo Mahmutlar ee Alanya. Toddobaadkii hore, tirada joogsiyada cusub ayaa kordhay 8 iyadoo 18 joogsad ah. Saldhigyada Alanyalý kuleylka xagaaga [More ...]
Olympos Teleferik, oo ah mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee dalxiiska beddelka ah iyo mid ka mid ah qiyamka ugu waaweyn Gobolka Kemer, ayaa sannadkan si wanaagsan u dhammaystiray isla markaana u dabaaldegay guusha iyada iyo shaqaalaheeda. Guul laga gaaro sanadkii la soo dhaafay ee 2019 [More ...]
Nidaamka Tareenka Heerka 3-aad ee Antalya oo la dhammeyn doono Abriil
Injineerro dhisme oo ay weheliyeen Mashruuca Mashruuca Jaranjarooyinka Heerka 3aad oo baarayay isgoyska shaqada ee Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Muhittin Böcek, ayaa sheegay inay hadafkoodu yahay in la dhammaystiro mashruuca Abriil. Duqa Magaalada Caasimadda [More ...]
Aqoon-isweydaarsiga Gaadiidka Antalya Waa La Hayn Doonaa
Waxaa jiri doona xalalka dhibaatooyinka gaadiidka ee Antalya oo ay weheliso qaybaha magaalada. Duqa Magaalada Antalya ee Magaalo Weynta Muhittin Böcek, Antalya, waa la qorsheeyay, xeerarka, aqoonsiga ayaa wali kashaqeynaya hadafka laga leeyahay magaalo. Macnaha guud, ee daboolaya 7 degmo [More ...]
Gaadiidka maalinlaha ah ee ka socda Metropolitan ilaa Saklıkent Ski Center
Talyaanigu waxay la kulmaan baraf. Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay bixisaa 7 maalmood oo gaadiidka dadweynaha ah oo lagu tago Xarunta Saklıkent Ski Center, oo kamid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka ee Antalya. 2 kun 400 dherer maalin kasta Antalya [More ...]
Xallinta Isgoysyada Sirdoonka ee Qulqulka Gawaarida Magaalada Antalya: Gaadiidka waa mid jilicsan oo dhaqaala badan oo leh isgoysyada caqliga leh. Dowlada hoose ee Antalya waa mid kamid ah meelaha ugu badan ee taraafikada si loo yareeyo socodka taraafikada magaalada. [More ...]
Go'aanka raali ahaanshaha ee Alanya Mass Transportation
Go'aanka raalli ahaanshaha ee Gaadiidka Dadweynaha ee Alanya: Dawladda Hoose ee Antalya waxay xallisay dhibaatada gaadiidka ee khadka Kargicak-Mahmutlar-Alanya halkaasoo muwaadiniintu muddo sannado ah sugayeen xalka. Marka lagu daro 26 bas oo ah kuwa loo yaqaan Alanya Basaska Dadweynaha ee 6 [More ...]
Akhbaar kale oo wanaagsan oo loogu talagalay ardayda Antalya ee Gaadiidka Dadweynaha
Duqa Magaalada Böcek wuxuu raali ka yahay go'aanka ardayda Ardayda ka qalin jabisa dugsiga sare waxay ka faa iideysan doonaan dhimis hal sano oo dheeri ah Antalya Metropolitan Transportation Coordination Center (UKOME) ayaa sameysay go'aano taxane ah oo ardayda lagu farxo. Madaxweyne Muhittin Böcek [More ...]
Laba Joojin Oo Cusub Oo Loo Yahay Degmada Serik Ee Antalya
Antalya Metropolitan Municipal Serk'te Belkıs iyo Orta Mahalle'ye iyadoo la raacayo codsiyada muhaajiriinta ee lagu rakibay laba joogsi. Dowlada hoose ee Antalya, oo qiimeyn ku sameysa dalabaadka hogaamiyaasha Serik Belkıs iyo Orta Mahalle. [More ...]
Dawladda Antalya ee Magaalaweynta Wehelisa iyada oo lala kaashanayo ururada aan dawliga ahayn iyo Komishanka Adeegga Bilaashka ah ee Hay'ada Bilaashka ah si looga faa iidaysto gaadiidka dadwaynaha ee dadka naafada ah ayaa ka wada hadalay in hawshu noqoto mid aad u deggan. Antalya, dadka naafada ah waxay hadda ka heli karaan halka ay ku sugan yihiin basaska dadweynaha. [More ...]